एनआरएन अमेरिकाको सदस्यता किन लिने... :: डा. केशव पौडेल :: Setopati
डा. केशव पौडेल अमेरिका
सन् २००३ मा बेलायतको लन्डनबाट विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकत्रित गरी संवृद्ध नेपाल निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने र हाम्रा साझा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न गराउनको लागि सम्बन्धित पक्ष सँग पहल गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ "नेपालीका लागि नेपाली" भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अभियान हाल विश्वको ८० देशमा फैलिन सफल भएको छ। तिनै ८० देश मध्येको एउटा देश अमेरिका पनि हो।
अमेरिकामा एनआरएनएको स्थापना धेरै अघि भएको भएता पनि सन् २०१० पछि मात्र यसले गति लिन थालेको हो भने सन् २०१४ पछि मात्र यो संस्थाले संस्थागत बाटो पहिल्याउन सुरु गरेको हो। त्यस पछिका दिनहरू देखि आज सम्म आई पुग्दा आजको स्थितिमा एनआरएनए अमेरिका पूर्ण परिपक्व भैसकेको छ । बिना स्वरूपको संस्था पूर्ण स्वरूप बनेको छ आज। यसको सम्पूर्ण श्रेय सम्पूर्ण तपाइहरूलाई नै जान्छ । तपाईँहरूको सहयोग, समर्थन र साथ, सहभागिता विना हामी यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ।
आज फेरी पनि हामी नयाँ सदस्यता वितरणको क्रममा छौँ। हामीले हाम्रो पुराना सदस्यता स्वतः नवीकरण मात्र गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सकेनौ। यसको एउटै मात्र कारण भनेको हाम्रो पुरानो वेबसाइट कम्जोर प्रकृतिको भएको कारणले वेबसाइट पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता हामी सबैले महसुस गर्‍यौँ । अहिले पुनर्निर्माण पछि हामी सँग सुरक्षित , गोपनीय र भरपर्दो वेबसाइट छ। जसले गर्दा तपाइका सम्पूर्ण सूचनाहरू सुरक्षित रहने छन् ।
सदस्यता किन बन्ने? सदस्यता लिएर के फाइदा छ? एनआरएनएले हामीलाई के दिएको छ र?
अहिले यी र यस्ता प्रकृतिका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।अवश्य पनि सदस्यता लिने नलिने हरेक व्यक्तिका बैयक्तिक स्वतन्त्रता हुन् । त्यस माथि अमेरिका सम्म आएर आफ्नो छेत्रमा स्थापित तपाईँहरूलाई मैले बुझाउनु पर्ने त पक्कै होइन तर पनि संस्थाको दुई कार्यकाल नेतृत्व गरी बिदा हुँदै गरेको मैले सदस्यता वितरणको लगभग अन्तिम समयमा केही कुरा भन्न चाहे ।
व्यक्तिगत तवरमा संस्थाले पक्कै पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई लाभ हानि दिने केही छैन । तर एउटा सत्य के हो भने हामी चाहेर वा नचाहेर परदेशी भई सकेका छौ र आफ्नो भूगोल छाडेर भावनाको देशमा जीवनयापन गरिरहेका छौँ।
हामी र हाम्रो परिवार विदेशमा भए पनि हाम्रो नाता गोता ,श्री सम्पत्ति ,जाय जेथा सबै नेपालमा नै छ । बिदेशिएका नेपालीहरू प्रति नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका , राज्यका सबै अङ्गहरू धेरै सकारात्मक नभएको पृष्ठभूमिमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छौँ । त्यो हो संविधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था ।
संविधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था हुनु यो झिनो मसिनो कुरा अवश्य होइन । विदेशमा बस्ने झन्डै ५० लाख नेपालीहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घको छाता मुनि उभिएर देखाएको ऐकवध्दताकै कारण प्राप्त भएको हो ।
कल्पना गरौँ कि हामी सँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ थिएन भने हामी एक्लै चिच्याएको भरमा संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था हुन्थ्यो होला त ? अवश्य पनि हुने थिएन । त्यसैले खोलो तर्‍यो लौरो बिर्सियो नगरौँ ।
अरू पनि हाम्रा थुप्रै समस्याहरू छन् जुन सामूहिक रूपमा एनआरएनले लड्नु पर्ने छ । हिउँदे अधिवेशन मार्फत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण हुँदै छ । अझै नागरिकताको लागि थुप्रै लडाई लड्न वाकी नै छ । त्यो लडाई लड्न सानो समूहबाट भनौ या फुटेर सम्भव छैन । नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान पछि पनि हामी सँग अर्को एउटा ठुलो समस्या बाँकी नै रहन्छ, त्यो हो दोहोरो कर प्रणाली।
अर्को तर्फ आप्रवासीको पहिलो पुस्ताको लागि मात्र नेपालसँगको सम्बन्ध आवश्यकता होइन । हाम्रो दोस्रो, तेस्रो गर्दै हरेक पुस्ता नेपाली माटो सँग जोडिनु पर्छ र जोडिन पाउनु पर्छ भन्ने चाहाना पनि हो । त्यही कारणले एनआरएनले विदेशमा जन्मिएका नेपाली बाऊआमाका सन्तानलाई पनि गैर आवासीय नागरिकताको माग गरेको हो । विश्व ग्लोबलाईजेसनको युगमा हाम्रा सन्ततिको सम्बन्ध नेपाली माटोसँग जोडिनको लागि पनि गैर आबसिय नेपाली सङ्घ सँग हाम्रो युवा पुस्ता हरेक पहिलामा जोडिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
एनआरएनएको परिचय पत्रबाट विभिन्न व्यवसायबाट व्यक्तिगत रूपमा पाइने सहुलियत र आकस्मिक सेवा सहयोगका केही उदाहरणहरू हुन। यसका अलावा नेपालमा आन्तरिक उडानमा गैरआवासीय परिचय पत्रका कारणले हामीले नेपाली नागरिक सरह भाडा दर पाउछौं, नत्र विदेशी नागरिक सरह पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ।
के हो त दोहोरो कर प्रणाली?
एउटै आयस्रोत बाट आर्जन गरेको आयको दुई पटक भुक्तान गर्नुपर्ने कर लाई नै दोहोरो कर प्रणाली भनिन्छ।
जस्तै, तपाईँले अमेरिकामा आर्जन गरेको धन सम्पत्ति नेपाल लान चाहनु भएमा, वा नेपालमा भएको पुर्ख्यौली धन सम्पत्ति वा नेपालमा व्यवसाय गरेर कमाउनु भएको धन अमेरिका ल्याउन चाहनु भएमा, वा तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ र अमेरिकामा व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, वा अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ र नेपालमा व्यापार व्यवसाय छ भने तपाईँले नेपाल र अमेरिकी सरकार दुवैलाई एक एक पटक गरी एउटै आयस्रोतको कर दुई पटक तिर्नु पर्दछ।
समाधान: यसको एउटै मात्र समाधान हो, अमेरिका र नेपाल बिच दोहोरो कर प्रणाली सम्बन्धी सन्धि गर्नु। यस्तो सन्धि गर्न गराउनको लागि सम्बन्धित दुवै पक्ष तयार हुनु पर्दछ।
यसको लागि एनआरएनए अमेरिकाले पहल गरिरहेको छ। एनआरएनए अमेरिकालाई नेपाल सरकारले त चिन्छ तर अमेरिकी सरकारले भने चिन्दैन। अमेरिकी सरकारलाई एनआरएन अमेरिका, अमेरिकन नेपालीहरूको साझा र ठुलो संस्था हो भनेर चिनाउनको लागि र दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न पहल गर्नको लागि पनि तपाईँहरूको सहभागिताको ठुलो खाँचो छ।
हाम्रो सदस्य सङ्ख्या हेरेर नेपाल र अमेरिका दुवै देशले हाम्रो आवाजको वजन नाप्ने गर्दछन् । हामीले हाम्रो सदस्य सङ्ख्या व्यापक बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा मुद्दा र समस्याहरूको समाधान गर्न सहज हुने छ हाम्रो आवाजको सुनुवाइ हुने छ ।
विश्वभरि नेपाल र नेपालीको पहिचान बनाउनका लागि, विदेशमा नेपाली भाषा , साहित्य र संस्कृतिको बिकाशकालागि, माईनोरिटी कम्यनिटिको रूपमा हामी नेपालीले पाउने सुविधा पाउनका लागि, नेपालीहरूलाई अमेरिकाको मूल प्रवाहमा समाहित गराउनका लागि पनि ठुलो समूहको नै आवश्यकता पर्दछ, हामी बसेको देश अमेरिकामा भन्ने गरिन्छ ” नम्बर म्याटर्स " ।
हामी भिजिबल हुनका लागि, हाम्रो आवाज नेपाल र अमेरिका दुवै देशमा सुनिनका लागि, हॉमी सबै एकताबद्धभई हाम्रो सङ्ख्या ठुलो हुनु पर्छ,
आउनुहोस् आजै सदस्यता बनौँ, हाम्रो यो साझा संस्थालाई हाम्रो सामूहिक हितमा लाग्नको लागि ठुलो संस्थाको रूपमा चिनाऊँ। सदस्यता लिँदा तपाइहरूले दिनु पर्ने नाम, फोन नम्बर र ठेगानाको गोपनियाताको ग्यारेन्टी एन आर एन अमेरिकाले लिने छ ।
(डा. पौडेल एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष हुन् )
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २९, २०७५, ०९:०६:००